१० हेलोवीन रातको लागि एकदम उत्तम डराउने फिल्महरू ग्याजेट समाचार
तपाईलाई सबैले थाहा छ, नोभेम्बर १ नजिकै छ, स्पेनमा सँधै "सबै संत दिवस" ​​को रूपमा चिनिन्छ तर हामी पार्टीलाई माया गर्छौं र उत्सवको जुनसुकै क्षणलाई अँगाले पनि अलि अलि बढी जान्न सकिन्छ हेलोवीन, ए Anglo्ग्लो-सेक्सन सेल्टिक उत्सव। त्यो रात बच्चाहरू घरको घण्टी बजाउन बाहिर मिठाइ माग्न बाहिर जान्छन् र त्यसोभए केटाकेटीहरू पार्टीमा बाहिर, भेषमा वा छुट्टी बिना बाहिर जान्छन्। यदि हामी आफूलाई भेस लगाउँछौं भने, आदर्श भनेको आफूलाई डरलाग्दो चीजको रूपमा भेषमा ल्याउनु हो, जस्तै एक जोम्बी, एक हत्यारा वा कसैको हत्या गरिएको छ। सबैमा, अब केहि सिफारिस गर्न राम्रो समय हो हरर चलचित्रहरू (MUAHAHA!)।
अर्को हामी सिफारिस गर्न जाँदैछौं १० स्लाशरहरू "उत्तम", उद्धरणहरूमा, यस हप्ताको अवधिमा हेर्नका लागि। मैले उद्धरण राखे किनभने सूचीमा त्यहाँ धेरै छन् डरलाग्दो क्लासिक्स, जुन प्रभाव, प्रकाश, फोटोग्राफी, र डबिंग को लागी किशोर वा पुरानो टाइमर अपील छैन, तर सूची मा क्लासिक मास्टरपीस हो। सूचीको क्रम फरक हुन सक्छ, तर नम्बर एक धेरै स्पष्ट छ। कट पछि तपाईंको सम्पूर्ण सूची हुन्छ र तपाईं बुझ्नुहुनेछ किन नम्बर एक अर्को चलचित्र हुन सक्दैन। केहि पपकोर्न समात्नुहोस् र प्रकाश बन्द गर्नुहोस् ... यदि तपाईं हिम्मत गर्नुभयो भने ...
सूचीको साथ सुरू गर्नु अघि, हामीले व्याख्या गर्नुपर्दछ कि «स्लाशर what के हो: यसलाई स्ल्यासर भनेर चिनिन्छ जुन एउटा विधा हो जुन the० को दशकमा जन्म भएको थियो जहाँ धेरै खूनी साइको यसले एक पछि अर्को गर्दै मानिसहरूलाई मार्दैछ। एक राम्रो स्लाशर एउटा हो जसमा पीडित किशोरीहरू हुन् कहिलेकाँही जब ती उमेरका व्यक्तिहरूबाट सुरक्षित हुँदैनन्, यद्यपि यो सम्भव पनि हुन्छ पीडितहरू बुढो हुन्छन्। यो पनि चाखलाग्दो छ कि त्यहाँ छ मृत्यु हुनु अघि यौन, केहि चीज जुन उनीहरूले स्क्रिम सागामा प्रतिबिम्बित गर्छन् (यदि तपाईं कुमारी हुनुहुन्छ भने तपाईं मर्न सक्नुहुन्न) र तिनीहरूसँग छ पियक्कड वा प्रयोग गरिएको लागूपदार्थ.
अर्को कुरा याद गर्नु चाखलाग्दो कुरा भनेको एल्म स्ट्रिट चलचित्रको अन्तिम सपनामा उनीहरूले भनेका कुरा हुन्, र यो हो कि यस किसिमका चलचित्रहरूले कहिलेकाँही "निर्दोषताको क्षति" पनि झल्काउँछन्। अन्य संस्कृतिहरूमा, जब एक किशोरी मानिस हुन जाँदैछ, उसले धेरै डरलाग्दो कुरा गर्नुपर्दछ, जस्तै पहाडमा चढेर कुनै राक्षसको सामना गर्नु, जुन आफ्नो परिवारको वयस्क हो। जब ऊ सकिसक्यो, ऊ पहिले नै एक मान्छे हो र सबैलाई थाहा छ। हाम्रो संस्कृतिमा, त्यो अनुभवको विकल्प हो डराउने चलचित्रहरू।
1 १०- अन्तिम गन्तव्य ((२०११)
2 - क्लाउनहाउस (१91989))
3 - प्रोम नाइट (१ 8 )०)
4 - खूनी भ्यालेन्टाइन (१71981१)
5 I- मलाई थाहा छ तपाईंले पछिल्लो गर्मीमा के गर्नुभयो (१61997))
6 Dev- शैतान पुतली (१51988)
7 - शुक्रवार १4औं (१ 13 )०)
8 - एल्म स्ट्रिटमा दुःस्वप्न (१ 3)))
9 २- टेक्सास चेनसा नरसंहार (१21974)
10 १- हेलोवीन (१ 1 1978)
१०- अन्तिम गन्तव्य ((२०११)
अन्तिम गन्तव्य धेरै प्रशंसकहरूको साथ सागाको घेरा बन्द गर्दछ। सबै अरूहरूमा जस्तै, नायकहरू तिनीहरू दुर्घटनाबाट बचाईन्छन् ती मध्ये एक जनालाई प्रिमानिसमेसन छ र उनीहरूको मृत्यु देखेकोमा धन्यवाद छ, जसले उसलाई आफ्ना सबै साथीहरूलाई यस क्षेत्र छोडन चेतावनी दिन्छ। तर मृत्युलाई धोका दिन मनपर्दैन, त्यसैले उसले चीजहरूको ठाउँमा राख्ने उपाय भेट्टाउनेछ। यदि हामीले ध्यानमा राख्यौं कि मृत्यु मनोवैज्ञानिक होइन, हामी भन्न सक्दछौं कि यो १००% स्लाशर होइन, त्यसैले यो १० औं स्थानमा छ।
गाथाको यो अन्तिम फिल्ममा केहि धेरै राम्रो विशेष प्रभावहरू छन्, जसले मलाई यो among बीचबाट छनौट गर्दछ, विशेष गरी सुरुमा मृत्यु। तर पनि, चलचित्र मा एक आश्चर्य छ अरू चारजनाले देखेका हामी सबैलाई हंस बम्पहरू दिइन्छ। मलाई थाहा छैन किन, तर यो मसँग यस्तो थियो कि म श्रृंखलाको प्रशंसक होइन, केवल सबैलाई एक पंक्तिमा हेर्नको लागि। एक हास्य किस्साको रूपमा, एक भाइको अनुभवमा टिप्पणी गर्नुहोस् जसले एक सपना देखेका थिए कि उसको विमानले पक्रनु भन्दा पहिले क्र्यास भयो। मेरो सासुले भन्छिन् उनीले सम्पूर्ण यात्रा (xD) बोलेनन्।
- क्लाउनहाउस (१91989))
संसारमा सब भन्दा राम्रो विचार, कि तपाईं जोकरहरूसँग डराउनुहुन्छ र तिनीहरूले तपाईंलाई सर्कसमा लैजान्छन्। क्लोनहाउसमा त्यस्तै हुन्छ जहाँ केसीका भाइहरूले उनलाई जोकरको डरबाट सर्कसमा लैजान्छन्। तर जोकरहरू हानिरहित पात्रहरू हुन्, जबसम्म केही पागल व्यक्ति पागल घरबाट भागेर आफैंलाई आफ्नो ठाउँमा राख्दैनन् ...
- प्रोम नाइट (१ 8 )०)
केही बच्चाहरू खेलिरहेका छन् र ती के गर्छन् जुन आज हामी एक केटीलाई बदमाशको रूपमा चिन्छौं, जो एक दुर्घटनामा पर्छ र मर्छ, त्यसैले उनीहरूले केही पनि नगर्न चुपचाप सन्धि गरे। तिनीहरू १२ वर्षको हुँदा यो भयो। Years बर्ष पछि परिवारले केटीको मृत्यु दिनको दिनमा मनाउँछ स्नातक नाच। यदि हामी प्रोम र एको साथ पुण्यतिथि सँगै राख्छौं homicidal उन्माद त्यो जेलबाट भाग्छ, के हुन सक्छ? «त्यहाँ रगत हुनेछ! "
- खूनी भ्यालेन्टाइन (१71981१)
Un खानी धोखेबाइको कारण खानीमा दुर्घटना हुन्छ, जसले उपस्थित चार जनाको मृत्यु गर्दछ र पाँचौंचाहिं कोमामा जान्छ। एक वर्ष पछि, ह्यारी वार्डन आफ्नो कोमाबाट ब्यूँझन्छ र सुरु हुन्छ मान्छेलाई आफ्नो पिक्याक्सको साथ हत्या गर्नुहोस् खानी र १० बर्ष पछि उसले फेरि मान्छे मार्न थाल्छ ... भ्यालेन्टाईन डेको दिनमा ...
यो चलचित्रसँग २०० of को आधुनिक संस्करण पनि छ र उही भनिन्छ, तर थ्रीडी थ्रीडी थप्दै। तपाईं प्रभावको लागि आधुनिक संस्करणमा हेर्न चासो राख्नु हुन्छ। सुरुवात शानदार छ।
I- मलाई थाहा छ तपाईंले पछिल्लो गर्मीमा के गर्नुभयो (१61997))
युवा समूहको एक समूह भोजबाट घर ड्राइभ गर्दै, पिउँदै र हाँस्दै, र केहि माथि दगुर्नुहोस्। तिनीहरू फिर्ता जान र यो थियो एक मानव। तिनीहरू के गर्न जाँदैछन्? तिनीहरू पियक्कड र उच्च ड्राइभ गर्दै थिए। के हुन्छ तिनीहरूलाई शरीरबाट छुटकारा पाउनको लागि हो र फेरि के भयो भनेर कहिले कुरा नगर्नुहोस्। तर केहि समय पछि, कसैले तिनीहरूलाई नोट पठाउँदछ कि पाठको साथ «मलाई थाहा छ तपाईंले पछिल्लो ग्रीष्म .तुमा के गर्नुभयो«। के सुरुमा कसैको खराब चुटकी जस्तो देखिन्छ जसले चुपचाप आफ्नो भाँडा भाँचेको छ, वास्तविक मृत्युको सपनामा परिणत हुन्छ जब तिनीहरू मर्न थाल्छन्।
Dev- शैतान पुतली (१51988)
«बच्चाको खेल» («बच्चाको खेल» वा «बच्चाहरूको खेल of) को मूल शीर्षकको साथ, यसलाई स्प्यानिशमा शीर्षकको अनुवादको साथ जान दिनुहोस् ...) हामीसँग एक धेरै खतरनाक अपराधीको कथा छ जुन एक गोलीमा गोली मारिएको छ खेलौना पसल। खलनायकलाई थाहा छ भुडु र यसलाई आफ्नो आत्मालाई "राम्रो केटा" ब्रान्डको पुत्रामा सार्न प्रयोग गर्दछ, चकी। Year बर्षे एंडीले यो पुतलीलाई माया गर्छिन्, किनकि उसले त्यसलाई सँधै माया गर्थ्यो र साथै, यसले उसले मूल सोचेभन्दा बढी गर्छ। तर यसले अझ धेरै गर्छ, जुन तपाईं माथिको छविमा देख्न सक्नुहुन्छ। म स्पोल्लरहरू गर्न चाहन्न, तर यो याद राख्नुहोस् कि मैले भने कि हत्यारा कसरी वुडू गर्ने भनेर जान्दछ ...
- शुक्रवार १4औं (१ 13 )०)
ती मध्ये अर्को महान क्लासिक जसले निस्किने सक्छ यदि तपाई धेरै युवा हुनुहुन्छ भने, तर त्यसले युगलाई चिन्ह लगायो। यो एक स्लाशर हो जहाँ नायक हो जेसन भूरहीसजसको अनुहार बिग्रेको छ, उसले बोल्दैन (उनी कुनै पनि चलचित्रमा केही बोल्दैन) तर सिनेमाको इतिहासमा सबैभन्दा खराब मनोवैज्ञानिक हो। व्यर्थमा होईन, र यो स्पोइलर होइन, ऊ असंख्य पटक मारिन्छ, तर ऊ बारम्बार पुनरुत्थान गर्दछ। एक मनोचिकित्सक हत्यारा भन्दा डरलाग्दो के हुन सक्छ जुन तपाईं छुटकारा पाउन सक्नुहुन्न?
- एल्म स्ट्रिटमा दुःस्वप्न (१ 3)))
पोडियमको तेस्रो चरणमा हामीसँग कालातीत क्लासिक छ, यदि हामीले पिन्टहरू र केही शटहरू बेवास्ता गर्छौं भने। कथा एल्म स्ट्रीटमा घट्छ, एक छिमेक जहाँ खलनायक, फ्रेडी क्रुगर, छिमेकीका बच्चाहरूलाई दुर्व्यवहार। आमाबाबु रिसाए, कानून आफ्नै हातमा लिनेछन्, फ्रेडीको कुर्सी बनाए र उनलाई जिउँदै जलाए। जब ऊ मर्दैछ उसले चेताउनी दिन्छ कि ऊ आफैंले साना बच्चाहरूलाई सताउन छोड्नेछ, तर जहाँ उनीहरूले सुरक्षा दिन सक्दैन ... तिम्रो सपनामा…
धेरै गहनताका साथ सपना देख्नेहरुका लागि चलचित्र सिफारिस गरिदैन। यदि तपाईं पुरानो संस्करण हेर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं "एल्म स्ट्रीटमा एक रातको सपना: मूल" देख्न सक्नुहुन्छ, यद्यपि मैले यो देखेको छु र म वेस क्रेभनलाई रुचाउँछु।
२- टेक्सास चेनसा नरसंहार (१21974)
दोस्रो चरणमा हामीसँग एउटा फिल्म छ जुन आज हामी यस शैलीको विशिष्टको रूपमा वर्गीकृत गर्न सक्छौं, तर यो त्यस्तो जस्तो छैन। टेक्सास नरसंहार आफ्नो प्रकारको पहिलो पाटो हो, जहाँ केही युवालाई खबर आउँछ कि उनीहरूको आफन्तको चिहान अपवित्र भएको छ, तिनीहरू चिहानमा गएछन् यो ठीक छ कि छैन भनेर जाँच्न, यो हो, र जब तिनीहरूले निर्णय गर्छन्। फर्कनु, तिनीहरूसँग एक छ तपाईंको कार संग समस्या। युवाहरू राम्रो समय पाउँदैछन् जब सम्म उनीहरू हराउँदैनन् ...
टेक्सास चेनसो नरसंहार स्लाशर शैली को पूर्व निर्धारित गर्न को लागी मानिन्छ, तर तिनीहरू युवा मानिसहरु जो एक पछि अर्को तल जान, यो सूची मा छ।
मूल शीर्षकमा शब्द appears देखिन्छमोटोसेरा«। म यो त्यहाँ छोड्छु।
१- हेलोवीन (१ 1 1978)
र नम्बर १ मा, यो कसरी हुन सक्दछन्, हेलोवीन। यो लेख लेखिएको मिति भन्दा यो स्थितिमा छ, तर यो कहिँ पनि हुन सक्छ। भनिन्छ कि यो चलचित्र एक हो शैली स्लाशर शुरू गर्नुभयो र यसले माइकल मायर्सको कथा बताउँदछ, मानसिक रोगी जो आफ्नी जेठी बहिनीको हत्या गरेको कारण शरणमा बन्द छ र यसमा भागेर जान्छ यस पटक उनकी कान्छी बहिनीको हत्या गर्नुहोस्.
यहाँ धेरै चलचित्रहरू छन् जुन मैले हेर्ने सिफारिस गर्दछु, यदि तिनीहरू १००% स्लाशरहरू नभए पनि, उनीहरू किन सूचीमा छैनन्।
देख्यो: यो गाथा यो होइन कि यसलाई स्लाशरको रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ, तर पजल सबैलाई रक्तपात गर्ने हत्यारा मध्ये एक हो, यद्यपि उनी आश्वासन दिन्छन् कि उसले सबै कुरा जीवनको मोल गर्न सिक्नु हो। साथै, जोनले भन्छ कि उसले कसैलाई पनि मारेन किनकि उसले जहिले पनि तिनीहरूलाई छनौट दिन्छ।
कलेक्टर y सङ्ग्रह: ती दुई फिल्महरू हुन् जहाँ त्यहाँ एक हत्यारा हो जसले केवल हत्या गर्दछ र मलाई लाग्छ कि उसको कुनै उद्देश्य छैन, वा उनीहरूले फिल्ममा भनेनन् (वा मलाई याद छैन)। म तिनीहरूलाई सिफारिस गर्दछु कि तिनीहरू कत्तिको उदास छन्। यदि तपाईं आतंक मनपराउनुहुन्छ, तपाईं तिनीहरूलाई मनपराउनुहुनेछ।
फ्रेडी बनाम जेसन: यो कसरी सम्भव छ? फ्रेडी सपनामा छ र जेसन छैन। यदि तपाईंले आफैलाई उही प्रश्न सोध्नुभयो जुन मैले आफैलाई सोधेको हुँ भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि यो अवलोकन गर्नुहोस्। म धेरै सुखद आश्चर्यचकित भएको थियो र एक बौने जस्तै मजा थियो। खैर, यो सम्भव छ र यो बुझ्छ।
कोही पनि बाँच्दैनन् (कोही पनि बाँच्दैनन्): एउटा चलचित्र जुन क्रूर मनोवैज्ञानिक "शान्त" हुन्छ। उसको बाटोमा केहि क्षुद्र अपराधीहरूले उसलाई क्रस र उक्साए। के हुन सक्छ? ठिक छ, "तपाईहरू गलत मानिससँग गडबड गर्नुभयो, मदरफु *****"
अत्यन्तै असक्षम हतियारको साथ लापरवाह ढिलो हत्यारा: र हामी यसलाई एउटा डरसँग छोडिदिन्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » १० डरलाग्दा फिल्महरू हेलोवीन रातका लागि उत्तम
सबैभन्दा डरलाग्दो खेलहरूको साथ एक फिल्म हेलोवीन खर्च गर्नुहोस्